छुट्लान् महरा ! होला आलमको जेलयात्रा ? (भिडियोसहित) « Janata Samachar
छुट्लान् महरा ! होला आलमको जेलयात्रा ? (भिडियोसहित)
प्रकाशित मिति : 21 October, 2019 7:14 pm
काठमाडौं । नेपाली जनताको यो साता चुनाव जिताएर पठाएका माननीयहरुको विषयमा सोधिखोजीमै बित्यो । निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराबारे के छ खबर ? साँझ अबेरसम्म बयान अनि फेरि अदालत पेश, फेरि हिरासत । रौतहटका माननीय मोहमद आफताव आलमको मुद्दामा के हुँदैछ ? यसपटक छुट्दैनन् नि आलम ? आम नेपालीको चासो छ ।
यतिमात्र होइन, सर्लाहीका माननीय प्रमोदकुमार साहले बुद्ध एयरको काउन्टरमा तोडफोड गर्नु भएको विषयमा पनि उस्तै चासो थियो । तर साह साधारण तारेखमा छुट्नु भएको छ । यस्तै, चुनावी झगडा र गुण्डागर्दी मुद्दामा दोलखाका सांसद पार्वत गुरुङलाई पनि अदालतले उपस्थितिका लागि गरेको वारेन्टले नयाँ तरंग दिएको थियो । यो शनिबार अखबारहरुले कार्टुनहरु समेत सांसदहरुलाई नै कटाक्ष गरेर प्रकाशन गरे । कतै जेलमै पो सभामुख र सांसदहरु धेरै हुने हो कि भनेर व्यंग्य हानियो । अर्थात् राजनीतिमा देखिएको विकृतिमा सरकारले गरेको एक्सनको नतिजा थियो यो । राजनीतिक आवरणमा अपराध चोखिइरहेको भन्नेहरुलाई पनि १२ वर्षपछि पनि मुद्दा चलाएर सरकारले सांसदहरुलाई हत्कडी लगाउँदा राजनीति संग्लिन खोजेको आभाष भएको छ । जनता खुशी नै छन् । यो क्रम चलिरहोस् ।
एक महिना नबित्दै विशिष्ट व्यक्तित्वहरुबाट भएको घोर अपराघका आधा दर्जन घटना बाहिर आएका छन् । तर मोहमद आफताव आलममाथिको आरोप ज्यादै गम्भीर प्रकृतिको छ । यद्यपि अदालतबाट अपराध प्रमाणित हुन बाँकी छ । तर आलममाथिको अभियोगले नेपालमा भएका सबै प्रकृतिको अपराधको पराकाष्ठा नाघेको छ । आततायीपनको सीमा पार गरेको छ ।
अदालतले म्याद थपेर मोहमम्द आफताव आलमबारे अनुसन्धान जारी राखेको छ । आइतबार थप पाँच दिन म्याद थप भएको छ ।
कुनै पनि देशमा अपराध रोक्ने कानुन हुन्छ । नत्र समाज बर्बर जंगली बन्छ । सामान्य कानुनको प्रयोगमा सर्वसाधारण र ओहोदाधारी भनेर छुट्याइँदैन । सांसद साहलाई पक्राउ गर्ना साथ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले जनकपुरमा सडकमा गरेको प्रदर्शनले कानुनी राज्य स्थापनामा बल पु¥याउँदैन । अपराधको अनुसन्धान गर्न र अदालती सुनुवाई गर्न दिइनु पर्छ ।
भीड खडा गरेर अदालती सुनुवाईमा प्रभाव पार्न हुँदैन । जनकपुरको सडकमा बालिएको टायर आन्दोलन हो कि अराजकता ? घटनालाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन गरिएका सबै प्रयासहरु असफल भएका छन् दोलखामा । ज्यान मार्ने उद्योग गरेको आरोपमा अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि आइतबार सांसद पार्वत गुरुङ जिल्ला अदालत काठमाडौंमा हाजिर भएर बयान दिनुभएको छ । अदालतबाट गुरुङलाई साधारण तारेख दिइएको छ । अदालतको सम्मान गरेर मात्र कानुनी राज्यको जग बसाल्न सकिन्छ ।
राजनीतिक यात्रामा नेताहरुमाथि लाग्ने दागको भागिदार स्वयम् नेताहरु नै हुन् । नेताहरुले गरेको कर्मका कारण नेताहरु आवद्ध पार्टीमाथि आलोचना व्यर्थ छ किनभने यसपटक सत्तारुढ न प्रतिपक्षी, सबै सांसदहरु अदालतको पुर्जी आउनासाथ हाजिर हुन पुगे । कसैलाई पनि कारबाही नगर्न, रोक्न आदेश भएन, आदेश दिने काम नहोस् भन्ने जनताको चाहना पूरा भयो । रौतहटका मोहमद आफताव आलम काण्डमा आक्रोशको प्रतिक्रिया दिनु भएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत विज्ञप्ति निकालेर आपराधिक घटना छानविनमा नेपाली कांग्रेस बाधक नहुने बताउनु भयो ।
यसलाई विधिकै शासन मानौँ । नेताहरुको आचरण सादगी बने कार्यकर्ता पनि कार्यकर्तामै करार हुन्छन् । नेताहरुले नै हो कार्यकर्तालाई कहिले चम्चा बनाएको, कहिले हनुमान बनाएको । जुन दिन पार्टीमा अशल कार्यकर्ता हुन्छन् र तिनको दिमागले नियमित काम गर्छ, पार्टी स्वतः जनताको चाहनामा चल्छ । त्यसैले अझै पनि हामी अनुरोध गर्छौँ, राजनीतिक आवरणमा कुनै अपराधकर्ममा जोडिनु भएका नेताहरु हुनुहुन्छ भने मुद्दा नउठ्दै पुग्नुहोस् अदालत र सच्याउनुहोस् आफ्नो चरित्र । जनता नेता सुध्रिएको हेर्न चाहन्छन् । राजनीति संग्लिएको हेर्न चाहन्छन् । हिंसाको बाटो छोडेर शान्तिको बाटोमा राजनीति हिँडिरहँदा अब समृद्धिको बाटोमा अपराधरहित समाज चाहन्छन् ।
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा कोरोना संक्रमित संख्या बढिरहेको छ । दिनहुँ संक्रमित बढिरहेसँगै सोमबार कोरोना
मापदण्ड पुरा गरी ट्याक्सी सञ्चालन गर्न संसदीय समितिकाे निर्देशन
लकडाउनका कारण चैत ११ गतेबाट सार्वजनिक यातायातहरु बन्द रहेका छन् ।
केन्द्रीय सदस्यहरुले सत्याग्रहमा पार्टीलाई एकीकरणको भावना र सहमति अनुसार एकतावद्ध लैजानु पर्ने माग गरेका छन्
सिन्धुलीको फिक्कलमा बोलेरो दुर्घटना, एकको मृत्यु
घाइते सबैको अवस्था गम्भीर भएकाले थप उपचारका लागि काठमाडौं लगिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा कोरोना संक्रमित संख्या बढिरहेको छ । दिनहुँ संक्रमित बढिरहेसँगै सोमबार कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या १ हजार ५…
मापदण्ड पुरा गरी ट्याक्सी सञ्चालन गर्न…
प्रहरीद्वारा कुटिएका दुई जनामा कोरोना संक्रमण,…
प्रहरीले कुटपिट गरेका ६ मध्ये २ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सप्तरी प्रहरीमा पनि कोरोना संक्रमणको त्रास बढेको छ ।
कोरोना रोकथामका लागि ग्लोबल आइएमईको १० लाख सहयोग
विपन्न परिवारलाई सोलार वितरण
डब्लुएचओमा जागिर लगाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने पक्राउ
स्पेनिस ला लिगा : बार्सिलोनाको जित्ने आशा कायमै
कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार प्रतिवादी १० वर्षपछि पक्राउ
पहिरोको जोखिममा परेका ७ घर परिवार सारिए
बाह्रबिसेमा पहिरोले २ जनाको मृत्यु, १८ बेपत्ता : सभामुख सापकोटा पहिरो स्थलमा